2020 मा दुबई मा एक नौकरी कसरि प्राप्त गर्न को लागि 🥇 【# संख्या 1 गाइड गर्न को लागि】 मददिंग मूल्यहरु!
2020 मा दुबई मा एक नौकरी कसरि प्राप्त गर्नुहोस?
दुबईमा तपाईंको आफ्नै व्यवसाय किन निर्माण गर्नुहुन्छ?
जोन स्मिथ सीईओ
तपाईं पनि या त खोजी सुरू गर्नुहोस् वा तपाईंलाई भर्खर दुबई रोजगारको बारेमा केही खबरहरू भयो। र तपाई युएईमा रोजगार बजारका लागि नयाँ हुनुहुन्छ। तपाईंले सबैभन्दा ठूलो कम्पनीलाई हिट गर्नु पर्छ। र दुबई मा सबै भन्दा राम्रो रोजगारदाता अझै पनि इमिरेट्स हो.
दुबई शहर कम्पनी सधैं राम्रो जानकारी प्रदान गर्दछ। यस पटक हामी कसरी अमीरात केबिन क्रू खुला दिन / पास गर्ने बारे जानकारी प्रदान गर्दछौं। मूल्यांकन + साक्षात्कार (भर्ती सल्लाह + प्रश्नहरू)
विशेष गरी संयुक्त अरब अमीरातमा रोजगार खोज्दै यसले केहि समय लिन सक्दछ। तपाईंले यो याद राख्नु पर्छ कि व्यक्ति जो दैनिक सयौं रेजुमेका वरिपरि हेडिंग लिइरहेका छन्। र निश्चित रूपमा व्यक्ति जो वास्तवमा इमिरेट्स कम्पनीमा कार्यरत छन्। मलाई तिम्रो बारेमा धेरै थाहा छैन। त्यसोभए तिनीहरूले तपाइँको CV लाई तपाइँको अनुभव र पक्कै तपाइँको व्यक्तिगत शिक्षा जाँच गर्नुपर्नेछ र यसले तिनीहरुलाई तपाइँको बारेमा बिस्तारै पत्ता लगाउन र अनुमति दिनेछ। तपाईको जीवनमा के गर्नुहुन्छ.
यसैले सँधै निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं तल हाम्रो गाइड अनुसरण गर्नुहुनेछ। किनकि हामी वास्तवमै के गर्छौं काम खोज्नेहरूका लागि हामी मद्दत गर्न प्रयास गरिरहेका छौं दुबई र अबु धाबीमा काम खोज्ने शर्तमा तपाईंले सकेसम्म धेरै पाउन सक्नुहुनेछ। हामी कामका बारे सुझाव र जानकारी प्रदान गर्दैछौं संयुक्त अरब एमिरेट्समा सम्भावित रोजगारदाताहरूका लागि आवेदन कसरी प्रबन्ध गर्ने र कहिलेकाँही खाडी क्षेत्रमा पनि।
केवल यो निश्चित गर्नका लागि तपाई गर्नुहुन्छ राम्रो र पूर्ण जानकारी छ। हामी कसरी अमीरातमा तपाईंको अनुप्रयोग सही तरीकाले बनाउने भनेर तपाईंको जानकारी प्रदान गर्दैछौं।
यस भिडियोमा, तपाइँ तिनीहरूको क्यारियर साइटमा एमिरेट्स केबिन क्रू अनलाइन रोजगार अनुप्रयोग भर्ने तरिकाको एक उदाहरण पाउन सक्नुहुन्छ (लि is्क हो - http://emiratesgroupcareers.com/engli…).
तपाईको काम खोजीमा अनुप्रयोग प्रक्रिया धेरै महत्वपूर्ण छ। तपाईलाई सँधै 100% हुनु पर्छ भनेर तपाई निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईको आवेदन भर्ती आवश्यकताहरूको सर्तमा लगभग निष्खोट छ। YouTube फिल्ममा तल हेर्नुहोस्। यो मान्छे बनेको छ रोजगार खोज्नेहरू र विश्वभरका मानिसहरूका लागि जो एमिरेट्स कम्पनी को आवेदन भर्न कसरी थाहा छैन। साधारणतया किनभने यो गर्न धेरै गाह्रो कुरा हो केहि मानिस वास्तवमा अन्य व्यक्तिलाई आफैंलाई मद्दत गर्न र प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ तपाईका लागि राम्रो तरीकाले कसरी गर्ने भनेर राम्रो जानकारीको लागि। र यसले तपाईंलाई भर्ती प्रतिनिधिहरूको अगाडि तपाईंको आवेदन प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ संयुक्त अरब अमीरातको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी।
पहिलो, एक राम्रो सीवी बनाउनुहोस्
एक उत्तम सीवी, वा के?
के तपाइँ एक समान CV पठाउनुहुन्छ, यदि तपाइँ बिभिन्न स्थानका लागि आवेदन गर्नुहुन्छ भने? "थोक" विज्ञापनमा प्रतिक्रिया दिन सक्छ तपाईंको खोजीको प्रभावकारिता कम गर्नुहोस्। सफलताको लागि कुञ्जी भनेको जानकारीको चयन र तथ्यहरूको प्रदर्शन हो सम्भावित रोजगारदातालाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण।
रिजुमे सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कागजात मध्ये एक हो। अमीरातमा, सुरूमा, यो एक मात्र कागजात हो यसले तपाईंको जीवन बचाउन सक्छ। ठिक छ, सामान्यतया बोलेको एक्सप्याजले पुनःसुरु गर्न र उचित कभर अक्षरहरूमा ध्यान दिँदैन। दुबई शहर कम्पनी यही कारण छ दुबईमा रोजगार कसरी पाउने भनेर मार्गदर्शन राख्दै 2020 मा ?.
तपाइँको प्रस्ताव को लागी जवाफ हुन सक्छ प्रतिबद्धता र व्यावसायिकता को प्रमाण। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले दुबईमा सम्भावित रोजगारदाताको अपेक्षाहरू पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुहोस्। विज्ञापनको विश्लेषणको बखत, तपाईंसँग सही तयारी छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने मौका छ र यदि तपाइँ रोजगारदाताले प्रस्ताव गरेको सर्तहरूसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ।
तपाईंले यो याद गर्नुपर्दछ कि युएईमा। त्यहाँ छन् दुबई वा अबु धाबीमा रोजगार खोजिरहेका हजारौं प्रवासीहरू। यदि तपाईं सही उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, तपाईंको बारेमा स्पष्ट र विचारशील तरिकामा जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्।
व्यावसायिक रिज्युम सिर्जना गर्न कुञ्जी एक नौकरीको विश्लेषण हो
हामी एक विशेषज्ञ खोज्दै छौं ...
हाम्रो कम्पनी दुबईको डाक्टरहरु खोज्दै हुनुहुन्छ
तपाइँ विज्ञापनलाई जवाफ दिनु अघि, विचार गर्नुहोस् कि तपाइँसँग एक विशिष्ट स्थान लिनको लागि सही कला छ कि छैन। जब विश्लेषण गर्दै, तपाईं यो निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ कि यो एक क्यारियर शुरू गर्न लायक छउदाहरण को लागी एक सहायक को रूप मा।
सँधै निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ उपयुक्त कामको विज्ञापनको लागि आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँको CV हजारौं रोजगारदातालाई पठाउँदै जो दंत चिकित्सक विशेषज्ञ खोज्न सक्छ र तपाइँको अनुभव मार्केटिंग मा छ कुनै पनि बिन्दु मा तपाइँलाई सबै मद्दत गर्दैन।
जिम्मेवारी जब तपाईं काम खोज्दै हुनुहुन्छ
स्थितिमा तोकिएको कार्यहरूको दायरा विश्लेषण गरेर, तपाईं प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईं सक्षम हुनुहुनेछ कि हुनुहुन्न तपाईको कर्तव्यहरू तपाईको अनुभव र क्षमता संग कार्य गर्नुहोस्। यदि अघिल्लो कम्पनीहरूमा गरिएका कार्यहरू घोषणामा तोकिएका आवश्यकताहरूसँग मेल खान्छ भने, त्यसोभए तपाईंसँग छ तपाइँको नयाँ काम पूरा गर्ने मौका। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो सीभीमा देखाउनुहोस् कि तपाईंसँग आवश्यक ज्ञान र सीपहरू छन्।
समान स्थितिमा न्यूनतम x-वर्षको अनुभव। यो हुन्छ कि रोजगारदाताले अनुभवको आशा गर्दैनन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षा र सीपको वर्णनमा ध्यान केन्द्रित गर्न लायक हुन्छ। प्रायजसो, अभ्यास महत्त्वपूर्ण छ।
यो देखाउन कि तपाईले पहिले जुन हालको लागि आवेदन दिइरहनु भएको जस्तो स्थिति राख्नु भएको छ, तपाईको रोजगार ईतिहास वर्णन गर्नुहोस् रोजगार को शीर्षक, रोजगार अवधि, र जिम्मेवारीहरू प्रदान गरेर। यो महत्त्वपूर्ण छ कि यी सामग्रीहरू एकरूप छन् कार्य प्रस्तावमा दर्साईएको कार्यहरूको साथ।
शिक्षा ... / अनुमतिहरू ...
एक नर्स, एक निर्माण ईन्जिनियर, एक शिक्षक - यी नियमन पेशे को उदाहरण हो, अर्थात ती केवल प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि तपाईंसँग अधिकार छ। साथै अन्य पेशाहरूको मामलामा, जस्तै पीआर कर्मचारी, व्यापारी वा प्रोग्रामरको रूपमा, रोजगारदातासँग अधिकार हुन्छ उम्मेदवारबाट विशेष शिक्षाको आशा गर्न.
तपाईले अध्ययन गरेको कुन पाठ्यक्रम पूरा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मात्र होईन। यो पाठ्यक्रम र प्रशिक्षण को टुक्रा उल्लेख गर्न लायक छ जुन कामको बखत तपाईंले आवश्यक सीपहरू प्राप्त र विकास गर्नुभयो। ग्राफिक कलाकारको रूपमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, उदाहरण को लागी, कार्यक्रम ह्यान्डलिंग कोर्सको बारेमा, जस्तै Adobe Photoshop, InDesign वा Corel Draw। जब तपाईं एक व्यक्तिगत ट्रेनर को पद को लागी आवेदन गर्नुहुन्छ, डाइटिक्स, आदि को क्षेत्र मा स्नातकोत्तर अध्ययन उपयोगी हुनेछ।
कम्प्यूटर प्रोग्रामहरु को ज्ञान जस्तै ...
प्रमाणपत्रहरू विशिष्ट सफ्टवेयर सीपहरू प्रदान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईंको सीभीमा पोर्टफोलियो संलग्न छ तपाइँको योग्यता पुष्टि गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
स्तरमा विदेशी भाषाको ज्ञान ...
यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईं प्रगति को स्तर निर्दिष्ट - यो भाषा प्रतिस्पर्धामा मात्र होइन कम्प्युटर प्रोग्रामहरूको ज्ञानमा पनि लागू हुन्छ। भाषा कौशलको पुष्टि प्राप्त गर्न, यो प्रमाणीकरण परीक्षा पारित गर्न लायक छ। तयारी को एक हिस्सा को रूप मा, तपाईं को पाठ्यक्रम को लागी जान सक्नुहुन्छ, जुन को अवधिमा तपाईं सिक्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि, परीक्षा रणनीति
सञ्चारनीयता, समय मा आफैलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता… - सफ्ट कौशल यो ध्यान राख्नु लायक छ कि, तपाईंको CV विश्लेषणको परिणामको रूपमा, भर्तीकर्ताले पत्ता लगायो कि तपाईं हुनुहुन्छ, उदाहरण को लागी, संगठित। यस्तो योग्यता को पुष्टिकरण सम्मेलन वा संयोजन संयोजन को हुन सक्छ काम र अध्ययन। कम्पनीको संगठनात्मक संस्कृतिसँग मिल्ने लाइनहरूमा फरक पार्नु महत्त्वपूर्ण छ तपाईसँग भएको सफ्ट स्किल्सबाट।
एक सीभी सिर्जना गर्दा, यो अतिरिक्त, वैकल्पिक सन्दर्भमा लायक छ आवश्यकताहरू नियोक्ता द्वारा उल्लेख गरिएको। यो एक सम्पत्ति हो जसले निर्णय गर्न सक्दछ कि तपाइँ काममा प्रवेश पाउनुहुनेछ।
यदि तपाईंले देख्नुहुनेछ - हामी दुबईमा एक नौकरी रिक्त स्थानहरू प्रस्ताव गर्दछौँ ...
जब तपाईं घोषणाको अन्तिम अंश पढ्नुहुन्छ, तपाईंसँग हेर्ने मौका छ यदि रोजगारदाताले प्रस्ताव गरेका सर्तहरूले तपाईंलाई तपाईंको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाइँ हो भनेर सोच्नुहुन्छ भने, यो पेशेवर सारांश मा उल्लेख लायक छ।
परिष्कृत CV ले तपाईंलाई अन्तर्वार्ता प्रदान गर्न सक्छ र फलस्वरूप तपाइँ काममा भर्ना हुनुहुनेछ भन्ने तथ्यमा योगदान पुर्‍याउनुहोस्। विज्ञापनहरूको जवाफमा पठाइएको CVs संख्या मान्य छैन; के सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तिनीहरूको गुणवत्ता हो। खोजीहरू हुन् अधिक प्रभावकारी यदि तपाईंको सीवी निजीकृत छ। कागजात सिर्जना गर्दा, सामग्रीको मात्र होइन तर फारमको पनि ध्यान दिन लायक छ - स्वच्छ र पारदर्शी। तपाइँ एक पेशेवर कागजात सिर्जना गर्नुहोस् दुबई कम्पनीहरूको CV सिर्जनाकर्ता प्रयोग गर्दै.
कुन सीवी 2020 मा सफलता सुनिश्चित गर्दछ?
रचनात्मक र अझै ठोस। आधुनिक, तर परम्परागत फारमको साथ संयोजनमा। मूल रूपमा, तर सरलता संग। अचम्मको कुरा, तर लाजमर्दो छैन। सही रूपमा, यसको मतलब बोरिंग हुँदैन। भर्तीकर्ताहरूको ध्यान आकर्षित गर्न नयाँ वर्षमा तपाइँको CV लाई कसरी ताजा गर्ने हामी सल्लाह दिन्छौं।
तपाईं प्रत्येक दिन अनुप्रयोगहरू पठाउनुहुन्छ, तर कुनै प्रतिक्रिया छैन ?. तपाईंलाई थाहा छैन समस्या के हो? हुनसक्छ तपाईले तपाईको CV मा अधिक वस्तुगत रूपमा हेर्नुपर्दछ, र आदर्श रुपमा यदि तपाईले कसैलाई सही अंग्रेजी भाषा राम्रोसँग पढ्न वा जान्न दिनुहुन्छ। मानव संसाधन विशेषज्ञहरुका अनुसारयो अभ्यास धेरै मूल्यवान छ। प्राय: अनुप्रयोग कागजातहरू भाषा, शैलीगत, हिज्जे र टाइपो त्रुटिहरूले भरिएका हुन्छन्।
विशेष रूपमा, Y पिढीले अब एक रचनात्मक पुनःसुरुमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, तर सही हिज्जेको नियम राख्न बिर्सनु र आधारभूत व्याकरणात्मक गल्तीहरू बनाउने - भन्नुहोस्, जोन स्मिथ, दुबई शहर कम्पनीका सीईओ
एक कागजात भन्दा बढी
एक विज्ञापन विज्ञापन पत्रक, हास्य पुस्तक वा भिडियोको रूपमा। सामग्रीहरू आइकन, संकेत, चित्र को माध्यम बाट व्यक्त। इन्फोग्राफिकमा जोड दिनुहोस्। त्यस्तो फेसन अब अनुप्रयोगहरूमा देखा पर्‍यो। अधिक र अधिक व्यक्तिहरू कागजातको रूपमा भन्दा उनीहरूको सीभीलाई प्रस्तावको रूपमा व्यवहार गर्दछन्।
यस्तो रचनात्मकता धेरै स्वागत छ, तर सर्तमा कि अलंकार र खोने शैली बाहेक, त्यहाँ महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि हुनेछ। एक भर्तीकर्ताको लागि, पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, विशिष्ट डेटाको बारेमा कहाँ र जब कसैले काम गरे, उसले के गरे, उसले के कर्तव्यहरू पायो र उसले के अनुभव प्राप्त गर्यो।
सीभी छोटो पार्ने प्रवृत्तिले फाइदाजनक परिणामहरू ल्याउँदैन - जोन बताउँछ। उनको रायमा, एक चाखलाग्दो विचार पारंपरिक फारममा सीभी तयार गर्नु हो र तपाईंको प्रोजेक्टहरू, पोर्टफोलियो वा वेबसाइटमा लिंक समावेश गर्नु हो जहाँ तपाईं कागजातको ग्राफिक्स विकास देख्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि हास्यको रूपमा।
एचआर विशेषज्ञहरु पनि टेक्नोलोजिकल नवीनता संग अति चार्ज संवेदनशील। - हरेक भर्तीकर्ताले उदाहरणका लागि QR कोड र मोबाइल अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सक्दैन जुन CVs पढ्न अनुमति दिन्छ। यसलाई थपको रूपमा व्यवहार गर्नु राम्रो हुन्छ, मानक समाधान बाहेक केहि थप - जोन स्मिथलाई जोड दिन्छ।
तपाईं कसरी भीडबाट अलग हुन सक्नुहुन्छ? के, इन्फोग्राफिक्स बाहेक, अहिले माथि छ?
आफ्नै वेबसाइट - हामी यसलाई पारंपरिक CV भन्दा बढी जानकारी प्रदान गर्न सक्दछौं, तपाईंको जुनून र कलाहरू देखाउँदछ।
भर्ती पोर्टलमा खाताहरू (जस्तै मेरो कार्य खाता) मध्ये एक हो वेबमा ती स्थानहरू जुन हामीलाई सम्भावित मालिकहरूसँग जोड्दछन्। यहाँ नयाँ वर्षको साथ तपाईका कागजातहरू अपडेट गर्न लायक छ।
सीभी एक भिडियो को रूप मा - यो तपाईको सपनाको कम्पनी प्रस्तुत गर्ने चाखलाग्दो तरीका हो, तर यदि हामी क्यामेराको अगाडि डर महसुस गर्छौं भने, हामीसँग मिथ्या र प्रवाही, स्वतन्त्र बोलीका साथ समस्याहरू छन् - यस प्रकारको अनुप्रयोगको लागि आफैलाई जबरजस्ती नगर्नुहोस्।
सामाजिक मिडिया - हो Headhunters द्वारा भ्रमण गरिएको, त्यसैले यो एक पेशेवर चलान प्रोफाइल को ख्याल राख्नु लायक छ। उद्योग सामाजिक मिडिया मात्र होईन जागिर खोज्न सहयोगी हुन सक्छ। उनीहरूको केरियरका केही कथाहरू फेसबुक पोर्टलमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
हामी सहभागी हुने घटनाहरू वा प्रोजेक्टहरू वर्णन गर्दै, पेशेवर सफलता साझा - हामी भर्तीकर्ताको आँखा डाउनलोड गर्न सक्छौं। बल द्वारा केहि पनि छैन
दुबई जॉब मार्केटको एचआरको अवलोकनहरूले देखाउँदछ कि रचनात्मक, असामान्य पुनःसुरु हुन्छ विभिन्न उद्योगहरूमा। तिनीहरू रचनात्मकता र चतुरता चाहिने पदहरूको लागि आवेदन गरेर स्कोर गर्न सकिन्छ, जस्तै मार्केटिंग वा विज्ञापन विशेषज्ञ, ग्राहक सेवामा विशेषज्ञ वा मोबाइल अनुप्रयोग प्रोग्रामर, जसले आफ्नो सीभी प्रस्तुत गर्दछ, उदाहरणका लागि कम्प्युटर गेम वा वेबसाइटको रूपमा। समान रूपमा, इन्फोग्राफिक हुनेछ कुनै पनि अन्य रचनात्मक क्षेत्रमा काम गर्नुहोस्.
जहाँसम्म, यदि हामी एक भिडियो मा हाम्रो व्यावसायिक अनुभव वा हास्य पुस्तक ड्राइंग को बारे मा कुरा गर्न पर्याप्त बलियो महसुस गर्दैनौं - यसलाई मात्र जान दिनुहोस् र ट्रेन्डहरू मात्र अनुसरण नगरौं। - कहिलेकाँही पुनःसुरु केवल अयोग्य प्रतिलिपि हुन्छ, टेम्प्लेटको नक्कल। गरीब कारीगरी मात्र डुबकी उम्मेदवार - जोन स्मिथ अवलोकन गर्दछ।
पागल तर सच - एक सीवी को सट्टा लेफलेट!
पत्रकहरू हस्तान्तरण कहिले काँही काम गर्नुपर्दैन! यो एक तरिका हुन सक्छ युरोपमा रोजगार खोज्न। यो पोलिश व्यापारी डेविड डोब्रोस्कीले प्रमाणित गरे जसले वारसा कार्यालय भवन अन्तर्गत काम गर्ने उम्मेदवारको रूपमा पत्रपत्रिका हस्तान्तरण गरे।
Pracuj.pl दाऊदलाई सोच्छ यदि विचार फेला पारियो हिट हुन र उसले आफ्नो सपनाको जागिर फेला पारे.
एक नौकरी खोज्न रचनात्मक तरिका फरक हुन सक्छ। जब केहि मान्छे आफ्नो समानता संग बिलबोर्ड लटका या फेसबुक मा fanpages बनाउन को लागि, दाऊद ले फैसला गरे ... उडान! यसले काम गर्यो?
तपाईं हुनुहुन्थ्यो एक गैर-मानक तरीकामा काम खोज्दै ...
डेविड डेब्रोस्की: मलाई थाहा छैन यो पूर्ण रूपमा गैर मानक हो। मसँग यो प्रभाव छ कि मैले प्रयोग गरेको विधि व्यापक रूपमा परिचित छ, यद्यपि वास्तवमा व्यक्तिहरू जसले यसलाई प्रयोग गर्छन् काम खोज्नको लागि प्रायः देखिदैन.
यो कसरी ठीक देखिन्छ?
डेभिड।: मैले भर्खरै पर्चाहरू हस्तान्तरण गरे (हाँसे)। तर कुनै पनि पत्रकहरू मात्र होईन। मलाई उनीहरूलाई पेशेवर फोटोग्राफहरूमा देखाईएको थियो, अतिरिक्त रूपमा ममा सम्पर्क विवरणहरू राख्छु र पुस्तिकाको एक छेउमा QR कोड राख्छु। मेरो पेशेवर प्रोफाइलमा पुनःनिर्देशित गर्दै, र अर्को तिर एक मल्टिमेडिया पुनःसुरु गर्न। ठीक छ, म केवल कुनै पनि होइन, किनभने 8 र9बीचमा: 30 बिहान वारसामा सबैभन्दा ठूलो कार्यालय भवनहरूमा प्रवेशद्वारमा, निद्रा कर्मचारीहरु तिनीहरूका ओठ मा एक मुस्कान संग। ती मध्ये धेरैले पर्चा प्राप्त गरे पछि पनि मुस्कुराए।
यस फारमको लागि विचार कहाँबाट आयो?
डेभिड।: म त्यस्ता कामहरू गर्न चाहन्छु! म मार्केटिंगमा जागिर खोज्दै थिए। यस कार्यको साथमा म यो देखाउन चाहान्छु कि म सृजनात्मक छु, वैचारिक सोच्नुहोस्, मेरो विचारहरू विशिष्ट लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र विशिष्ट भावनाहरू उत्पन्न गर्नमा केन्द्रित छन्। फारमले त्यो प्रमाणित गर्ने थियो म हरेक कम्पनीको सपनाको कर्मचारी हुँ। थप रूपमा, अक्रियता जस्तो कामको खोजीमा र ईमेल नहुने ईमेलको प्रतीक्षामा कुनै खराब चीज छैन। म रचनात्मक केहि गर्न चाहन्थें, चार भित्ताबाट बाहिर निस्कनुहोस्। यो एक ठूलो अनुभव थियो।
यद्यपि, तपाईं यस्तो समाधानमा लगानी गर्नु पर्छ ...
डेभिड।: यो पुस्तिका मेरो आफैंले डिजाईन गरीएको थियो, फोटोहरू मेरो सहकर्मी फोटोग्राफरले छूट पछि लिएका थिए, मैले एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएँ र मैले आफैंले मल्टिमेडिया सीभी पनि गरें, तर प्रिन्ट प्रिन्ट हाउसले सुरु गरिसकेका थिए। साथै, लागत विशेष रूपमा उच्च थिएन, यद्यपि यो PLN 1,200 मा लगानी थियो। म अस्वीकार गर्न सक्दिन कि एक्लै पुस्तिका तयार पार्ने प्रक्रिया केहि घण्टा पछि मलाई दैनिक कामको लगभग तीन हप्ता लाग्यो। तर यो समय खर्च गर्न लायक थियो।
के परिणामहरू थिए?
डेभिड।: नतिजा राम्रो थियो। यस पुस्तिकाका प्राप्तकर्ताहरूबाट प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया बाहेक, जुन प्रायः धेरै सकारात्मक थियो, मैले विचारका लागि बधाईको साथ धेरै ईमेलहरू प्राप्त गरें। यो मेरोलागि महत्वपूर्ण थियो किनभने यदि एक व्यक्ति रोजगार खोज्दैछ, ऊ सामान्यतया राम्रो महसुस गर्दैन।
त्यो प्रेरणा चाहिन्छ। मैले जम्मा 1000 पर्चा बनाएँ, म हप्तामा आधा मा पाँच सय दिने प्रबन्ध गरे, र त्यसपछि मैले अरू दिएन, किनकि अभियानको सुरु भएको केही दिन पछि I अन्तर्वार्ताको लागि आमन्त्रित हुन सुरु भयो। त्यहाँ तिनीहरूमध्ये एक दर्जन थिए, जसमध्ये केही पोल्याण्डको सब भन्दा ठूला कम्पनीहरूमा थिए।
तपाईंले कसरी अन्तमा नौकरी पाउनुभयो?
डेभिड।: यो अचम्म लाग्न सक्छ, तर मैले दुबई शहर कम्पनीलाई एउटा काम पाएँ धन्यवाद (हाँसे)। यद्यपि मैले पत्रपत्रिकाहरूलाई धन्यवादको रूपमा धेरै जागिरहरू पनि प्राप्त गरें, दुबई शहर कम्पनीमार्फत नै म मेरो हालको रोजगारदातासँग सम्पर्कमा आएको थिएँ। उहाले मलाई सबैभन्दा राम्रो सर्तहरू प्रस्ताव गर्नुभयो र म मेरो हालको कम्पनीको लागि काम गर्ने निर्णय गर्न हिचकिचाउँदिन।
यदि आवश्यक थियो भने, तपाइँ यो प्रयोग दोहोर्याउनुहुन्छ?
डेभिड।: म यस आवश्यकतालाई रोक्नको लागि सबै गर्नेछु, तर यदि म यो गर्न बाध्य भएमा, म यस भन्दा पनि भव्य चीजहरू गर्छु। म अरूलाई नगर्ने काम गर्न मनपराउँछु!
के सल्लाह आज तपाईले युरोपमा काम खोज्नेहरुलाई दिनुहुन्छ?
डेभिड।: मसँग थियो भने केहि संग डील गर्न, कि यो हुनेछ। अरूले नगर्ने पनि नगर्नुहोस्, आफैमा विश्वास गर्नुहोस् र यदि तपाईं आफ्नो सबै उत्साह, प्रतिभा र समय सब भन्दा साधारण चीजमा राख्नुहुन्छ भने एक, तपाई धेरै गर्न सक्नुहुन्छ.
8 चीजहरू जुन काम खोज्न गाह्रो बनाउँदछ
एउटा अवरोध जागिर पाउन अपर्याप्त वा अपर्याप्त योग्यता हुन सक्छ। धेरै तपाइँको मनोवृत्तिमा पनि निर्भर गर्दछ। यो पनि विचार गर्नुहोस् यदि भर्तीकर्ताहरूबाट सन्देशको अभाव एक गैर-निजीकृत सीभी पठाएको कारणले गर्दा होईन।
1। काम खोजीको लागि सानो प्रतिबद्धता
काम खोज्नमा समस्याहरू थोरै संलग्नताको कारण हुन सक्छउदाहरण को लागी तपाईको CV लाई अनियमित रुपमा पठाउने। यो व्यवस्थित रूपमा रोजगार प्रस्तावहरू जाँच गर्न महत्त्वपूर्ण छ, उदाहरणका लागि Bayt.com पोर्टल - मोबाइल अनुप्रयोगको प्रयोगले तपाईंलाई कहिँ पनि, कुनै पनि समयमा विज्ञापनहरू ब्राउज गर्न अनुमति दिन्छ। सीभी पठाउनु अघिनिश्चित गर्नुहोस्, नियोक्ताका आवश्यकताहरू पढ्न र तपाइँको सीवी निजीकृत गर्नुहोस् कि यो विशेष प्रस्तावको अनुरूप छ। यदि तपाइँको योग्यता धेरै प्रस्तावहरूको लागि पर्याप्त छैन, यो मूल्यवान जानकारी हो - तपाईंले रुचि राख्नु भएको उद्योगमा रोजगारी पाउनको लागि तपाईंले दक्षता विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
2। सीवीमा त्रुटि र गल्तीहरू
एक सम्भावित नियोक्ता तपाईंको सीभीमा त्रुटिहरू हटाउन सक्छ। कागजात पठाउनु अघि कृपया सामग्री ध्यानपूर्वक जाँच गर्नुहोस्। कृपया नोट गर्नुहोस् कि त्यहाँ कुनै टाइपहरू, हिज्जे वा शैलीगत त्रुटिहरू छन्।
3। CV मा कुनै आवश्यक डेटा छैन
रोजगार खोज्नमा कठिनाई तपाईंलाई सम्पर्क गर्न असमर्थता पनि हुन सक्छ। फोन नम्बर र इ-मेल ठेगाना सीभीमा समावेश गर्नुपर्दछ। यदि तिमी यसका बारे बिर्सनुहोस्, भर्तीकर्ता तपाइँको आवेदनमा प्रतिक्रिया दिन सक्षम हुनेछैन।
4। कागजातको अमान्य प्राप्तकर्ता ठेगाना
पठाउनु अघि तपाईंको सीवी, सँधै जाँच गर्नुहोस् कि तपाईंले सहि ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुभयो। हुनसक्छ कम्पनीले तपाइँको आवेदनलाई प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन किनभने - उदाहरणका लागि गलत पत्रका कारण - यसले सही कागजातहरू प्राप्त गरेको छैन।
5। कुनै आवश्यक पर्दैन
एउटा अवरोध काम खोज्दा औपचारिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न असफल हुन सक्छ। यदि तपाईंको कम्पनीलाई जर्मनको ज्ञान चाहिन्छ र तपाईंले मात्र अंग्रेजी घोषणा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको उम्मेदवारी खारेज हुन सक्छ। तपाईंले आफ्नो CV पठाउनु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सीपहरू रोजगारदाताको अपेक्षाहरूसँग मेल खान्छन्।
6। अनुभवको कमी / अति उच्च योग्यताहरू
रोजगार खोज्नमा कठिनाईहरू पेशागत अनुभवको अभाव वा धेरै उच्च योग्यताको परिणामबाट हुन सक्छ। यदि भर्तीकर्ता एक व्यक्ति खोज्दै छ न्यूनतम3वर्षको अनुभवको साथ, उसले सायद भर्खरै पढाइ सिध्याएका उम्मेद्वारलाई आमन्त्रित गर्ने छैन। कहिलेकाँही, धेरै धेरै अनुभव एक अवरोध हो।
एक रोजगारदाता जसले तपाइँको योग्यता उसको वा उसको आवश्यकताहरु भन्दा बढि डराउँछ कि तपाइँ चाँडै काम गर्न छोड्नुहुनेछ भन्ने डरले डराउँछ अधिक चुनौती र पेशेवर अवसरहरूको खोजी गर्न.
7। साक्षात्कारको बेलामा राम्रो व्यवहार
यसले काम गर्यो - तपाईंको CV भर्तीकर्तालाई यत्ति चासो छ कि उसले तपाईंलाई एउटा अन्तर्वार्ताको लागि आमन्त्रित गर्‍यो। यसको नतीजा मुख्य रूपमा तपाईंको दृष्टिकोणमा निर्भर गर्दछ - यदि तपाईं दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले रोजगारीको अवसर गुमाउनुहुनेछ। तपाईंको समयनिष्ठता, कम्पनीको गतिविधिको ज्ञान र सटीक क्यारियर लक्ष्यहरू महत्त्वपूर्ण छन्।
तपाईं एक कार्य समाधान गर्न पनि सोधिन्छ, त्यसैले गर्न तयार हुनुहोस्। यदि तपाईंको प्रयासहरूको बावजूद, तपाईंले रोजगारी प्रस्तावहरू प्राप्त गर्नुहुन्न, निष्कर्ष निकाल्नुहोस् - यो तपाईंको उम्मेदवारमा प्रतिक्रियाको लागि भर्खरको सोध्न उपयोगी हुनेछ। सम्भवतः अर्को व्यक्तिले दिइएको स्थितिको लागि आवेदन गर्न कम्पनीको संगठनात्मक संस्कृतिको लागि राम्रो फिट देखा पर्दछ।
8। आफ्नो क्षमतामा विश्वासको कमी छैन
यदि तपाइँको कला र अनुभवले भर्ती गर्नेलाई चासो राख्दछ भने, यसको मतलव तपाईसँग स्थिति लिनको लागि अवसर छ। तपाईंको अनिश्चितता, आत्मविश्वासको कमी र प्रोजेक्टहरूको डर प्रदर्शन गरेर, तपाईंले काम गर्ने मौका गुमाउनुहुनेछ। तपाईको आत्मसम्मान बढाउनको लागि तपाईको प्रतिस्पर्धा र योग्यताका बारे सोच्नुहोस् - यो उनीहरूलाई धन्यबाद हो तपाईं आफ्नो सपनाको कामलाई अँगाल्न सक्नुहुन्छ।
मलाई र तपाईंको व्यावसायिक जीवनको संक्षेपमा सारांश कसरी संक्षेप गर्न सकिन्छ, तर निष्कपट?
CV तपाइँको पछिल्लो उपलब्धिहरूको सारांश हुनुपर्दछ। यो विवरण को ध्यान मा लिनु पर्छ व्यावसायिक अनुभव र कौशलता। तीन सर्तहरू कुञ्जी हुन्: विशेष रूपमा, संक्षिप्त र विषयमा।
क्यारियरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व
CV तपाईंको शोकेस हो। यो पारदर्शी र सम्भव भएसम्म कम्प्याक्ट मात्र हुनु हुँदैन, तर सबै प्रकारका त्रुटिहरू - मुक्त, हिज्जे र शैलीगतबाट पनि मुक्त हुनुपर्दछ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण तत्वहरू जुन तपाईंले तपाईंको रिजुमेमा राख्नु पर्छ तल थप्‍यो।
CV ले उम्मेदवारको नाम र उपनाम समावेश गरेको छ, साथ साथै विवरणहरूले तपाईंलाई सम्पर्क गर्न सक्षम हुनेछ: फोन नम्बर र इ-मेल ठेगाना। पेशेवर ई-मेल ठेगाना प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
CV मा अनुभव
CV मा पहिले कब्जा गरिएको पोजीशनहरूको सूची हुनुपर्दछ - विशेष गरी जसले उद्योगको ज्ञान प्रमाणित गर्दछ। कर्तव्यहरूको दायरा उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्न लायक छ। कब्जा गरिएका पदहरू उल्टो कालक्रम क्रममा प्रस्तुत गरिनु पर्दछ - सकिएको अन्तिम कामबाट सुरू गर्दै।
रिजुमेको यस अंशमा विदेशी भाषाहरू र विशेषज्ञ योग्यताको अन्य ज्ञानको बारेमा जानकारी हुनुपर्दछ। यो नरम कौशल उल्लेख गर्न लायक छ - विशेष गरी ती यो सम्भावित काममा उपयोगी हुनेछ।
पूरा कोर्सहरू र प्राप्त प्रमाणपत्रहरूको सूची
यदि तपाइँ थप पाठ्यक्रम र प्रशिक्षणमा भाग लिनुभयो भने - तपाइँको CV मा यसका बारे लेख्नुहोस्। मुख्यतया ती गतिविधिहरूमा ध्यान दिनुहोस् तपाइँ रुचि राख्नु भएको स्थितिमा यो उपयोगी हुन सक्छ.
व्यावसायिक लक्ष्यको उल्लेख गर्नुहोस्
यदि तपाईं सीभी सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो क्यारियर लक्ष्य को बारे मा केहि वाक्य लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको अगाडि विकासको लागि के योजनाहरू छन् प्रस्तुत गर्नुहोस्, वर्णन गर्नुहोस् कि तपाईं केको लागि लक्ष्य गर्दै हुनुहुन्छ। यसका लागि धन्यबाद, तपाईंले सम्भावित नियोक्ता देखाउनुहुनेछ जुन तपाईं आफ्नै लागि एउटा विचार राख्नुहोस् र जान्नुहोस् कि तपाईं भविष्यमा के प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ.
महत्वपूर्ण नियम - डाटा अपडेट गर्नुहोस्
पेशेवरको सीभी एक चलिरहेको आधारमा अपडेट गरिनु पर्छ। यो एक विशेष रोजगार प्रस्ताव मा अनुकूलित हुनु पर्छसम्भावित रोजगारदाताले चाहेको सुविधाहरू र सीपहरूमा जोड दिदै।
दुबईमा ईमानदारी सबै भन्दा माथि
कुनै गलत जानकारी पुनःसुरुमा समावेश गर्न सकिदैन। तपाईसँग नभएको कौशल गणना गर्नुहोस्। एक झूट तब प्रकाशमा आउनेछ जब दक्षताले वर्णन गरेको तपाई प्रमाणित हुनुहुनेछ.
सहायक उपकरण - CV सिर्जनाकर्ता अनलाइन
एक सीभी सिर्जनाकर्ताले तपाईंलाई पूर्ण, पढ्नयोग्य पुनःसुरु तयार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यसको लागि धन्यबाद तपाई कागजातमा महत्त्वपूर्ण तत्व राख्ने बिर्सनुहुनेछैन। तपाईं यसको दृश्य पक्षको पनि ख्याल राख्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् कि तपाईंको CV तपाईंको पास हो तपाईंको सपनाको जागिर खोज्न.
कसरी बाहिर उभिए र मूल CV सिर्जना गर्ने?
तपाईको रोजगारदातालाई प्रदान गर्ने जीवनी तपाईको बारेमा धेरै भन्छ। तपाईं यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं विवरणमा ध्यान दिनुहोस्, तपाईं सटीक र ... रचनात्मक हो कि होइन।
एक विपणन विशेषज्ञ वा इन्टरनेट डिजाइनरको एक अनौपचारिक पुन: सुरुआत ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ। एक दाई, पकाउने वा हरिहरको स्थितिको लागि, अरूको बीचमा आवेदन गरेर सजिलै देखाउन सक्नुहुन्छ कसरी जाँच्नुहोस्।
सक्कली र राम्रो देखिन्छ CV, वा के?
इन्फोग्राफिक्स, एक भिडियो फिल्मको रूपमा एक पुनःसुरु - केहि उद्योगहरूमा असाधारण जीवनीले हामीलाई छुट्याउन सक्छ। जे होस्, तपाईं संवेदनशील हुनुपर्छ र विचार गर्नुहोस् यो समाधान वास्तवमा उपयुक्त हुनेछ.
प्रत्येक उम्मेद्वारले अपरंपरागत सीभीको लागि अप्ट गर्नु हुँदैन। यो नबिर्सनुहोस् कि फारम भन्दा सामग्री महत्त्वपूर्ण छ। प्रोफेशन्स जसमा थोरै साहस र रचनात्मकताले हानी गर्दैन, उदाहरणका लागि:
मार्केटिंग विशेषज्ञले ग्राहकलाई आकर्षण गर्न सक्षम हुने आशा गरिन्छ। तपाईको रोजगारदातालाई विश्वास दिलाउन कि तपाईं बेच्न र बढावा दिन सक्नुहुन्छ… आफैलाई बढावा दिनुहोस्। उदाहरण को लागी, तपाइँ एक भिडियो क्लिप को रूप मा एक CV प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
आन्तरिक डिजाइनर CV
आन्तरिक डिजाइनरहरूको लागि पनि रचनात्मकता एक प्रमुख सुविधा हो। जब यो पेशा मा काम खोज्दै, तपाईंले एक असामान्य सामग्री लेआउटको साथ फंक्शनल रिजुममा शर्त लगाउनु पर्छ। कागजातमा पेशेवर फोटाहरू समावेश गर्नुपर्दछ पहिले सम्पन्न परियोजनाहरू.
क्यारियर / शिक्षक CV
के तपाईं विदेशी भाषाका शिक्षकको लागि बच्चाहरूको लागि कक्षा सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? वा हुनसक्छ तपाई कामका लागि आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ एक पूर्व स्कूल शिक्षक को रूप मा? तपाईं एक रचनात्मक दृष्टिकोण देखाउन सक्नुहुन्छ र, उदाहरणका लागि, हस्तशिल्पको रूपमा एक सीभी सिर्जना गर्नुहोस् (कढ़ाई वा डिकूपेज)।
रचनात्मकता पनि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुविधा हो पाक कला मा आफूलाई समर्पित गर्ने पेशेवरहरु को लागी। तपाईको सहजता देखाउनको लागि, तपाईले आफ्नो रोजगारदातालाई सीभीको साथ तपाईको मूल नुस्खा अनुसार बनाइएका भाँडा माझ्ने पेशेवर तस्विरहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि एक पाठ्यपुस्तकको रूपमा जीवनी लेख्न प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ।
वा हुनसक्छ यो एक सम्भावित रोजगारदाता पठाउन लायक छ एक ठूलो केक जहाँ तपाईं उद्देश्यका लागि आइसि using प्रयोग गरेर आफ्नो सीप "लेख्न" सक्नुहुन्छ? तपाईले आफ्नो सीवी लुकाउनु भएकोमा आश्चर्यको साथ कुक गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
मेकअप कलाकार / मेकअप कलाकार CV
मेक-अप कलाकारको सीभी रंगीन र प्रभावकारी हुन सक्छ, तर एकै साथ स्पष्ट र पारदर्शी हुन्छ। यो पोर्टफोलियोमा लिंकमा अनुप्रयोगमा जोड्न लायक छ, जसमा नियोक्ताले देख्न सक्नेछन्, उदाहरणका लागि, फिल्महरू जसमा तपाइँ मेक-अप र मेक-अप गर्नुहुन्छ।
मल्टीमीडिया सामग्री तपाईंको सीवीमा संलग्न हुन सक्छ जब तपाइँ हाउडर नाघेको स्थितिको लागि आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंले आफैंलाई कागजातमा काम गर्नको तस्वीर राख्न अनुमति दिन सक्नुहुनेछ। फोटोग्राफी पेशेवर हो कि यो महत्वपूर्ण छ, यकिन ठीक ज्योति, ट्रिममिड, आदि।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको रचनात्मकता व्यावसायिकता अस्पष्ट छैन। एक मूल्यवान CV केवल अविस्मरणीय मात्र छैन, यो सुवाच्य पनि हो र समावेश गर्दछ अनुभव, कौशल र व्यावसायिक लक्ष्यहरूको बारेमा कुञ्जी जानकारी। Pracuj.pl विजार्डको प्रयोग गरी पेशेवर रिजुयो सिर्जना गर्नुहोस्।
जब तपाईंको अनुभव छैन भने तपाइँको CV मा के लेख्नु हुन्छ
का लागि एक CV लेख्दै पहिलो काम अधिकांश व्यक्तिहरूको लागि ठूलो चुनौती हो। यो सही गर्नका लागि, तपाईंले समय खोज्नु पर्छ र तपाईंको टाउको शान्त गर्नु पर्छ - लेखले तपाईंलाई बाँकीमा मद्दत गर्दछ
सुरूवातका लागि शुभ समाचार - एक बायोडा सिर्जना गर्न आवश्यक पर्ने धेरैजसो चीज तपाईको दिमागमा छन्। एक सीभी सिर्जना गर्दा, तपाइँ तपाइँको मेमोरी को कोठा र crannies मा पुग्नु पर्छ आफ्नै बारेमा सोच्नुहोस्, तपाईंको जीवन र व्यावसायिक अनुभव र तपाईंको शक्ति र आवेश।
शिक्षाको साथ सुरू गर्नुहोस् - समाप्त गरिएको स्कूल
"शिक्षा" सेक्सनमा, हामी निरन्तर वा पूर्ण अध्ययनहरू (स्नातक, मास्टर, स्नातकोत्तर अध्ययन, आदि) वा एक पूर्ण व्यावसायिक विद्यालयमा बस्छौं। हामी अतिरिक्त रूपमा यहाँ विदेशी मुद्रामा जानकारी समावेश गर्न सक्दछौं।
हामी अघिल्लो स्कूलहरू प्रवेश गर्दैनौं - हाईस्कूल, कनिष्ठ हाई स्कूल वा प्राथमिक स्कूल। अपवाद हाई स्कूलहरू हुनेछन्, जसको प्रोफाइल र स्तरले प्राप्त गरेको संकेत गर्दछ थप सीपहरूउदाहरण को लागी, एक उच्च व्याख्यान स्पेनिश भाषा को साथ एक उच्च स्कूल।
एक सीवी मा व्यावसायिक अनुभव
यदि तपाईंसँग पहिले नै कामको अनुभव छ भने, तपाईंले जे सिकेका र ठ्याक्कै वर्णन गर्नुहोस् तपाईले के सीपहरू प्राप्त गर्नुभयो तपाईं आफ्नो अनुभव संग आफ्नो इंटर्नशिप, इंटर्नशिप र अनौठो रोजगार अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
जहाँसम्म, यदि तपाईंसँग पहिले नै तपाईंको अध्ययन वा भविष्यको क्यारियर सम्बन्धित विस्तृत अनुभव छ भने, तपाईं आफ्नो सीभीमा अनौंठो वा मौसमी कार्यहरू प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्न। ध्यान दिनुहोस् अघिल्लो व्यावसायिक उपलब्धिहरूको वर्णन गर्दै.
तपाईंको अध्ययनको दौरान तपाईंको गतिविधि एक प्रकारको अनुभव हो। "थप गतिविधि" खण्डमा आफ्नो उपलब्धिहरू हाइलाइट गर्नुहोस्।
सीवीमा बलियो र चासो
जागिर विज्ञापनमा, उम्मेद्वारको सफ्ट कौशल आवश्यकता प्राय: दिइन्छ। कस्तो किसिमको व्यक्ति दिईएको कम्पनी खोजी गर्दैछ, तपाईं यसको संगठनात्मक संस्कृति र दर्शनबाट पनि घटाउन सक्नुहुन्छ, जुन वर्णन गरिएको छ नियोक्ताको क्यारियर ट्याब र सीधा दुबई र अबु धाबीमा धेरै काम साइटहरूको वेबसाइटमा।
तपाईंको बल र जुनून जो नियोक्ता को अपेक्षाहरु संग मेल खाती हो, तपाईंको CV को प्रासंगिक वर्गहरुमा दर्ज गर्नुहोस।
आफैलाई सोच्न पछि, समय अन्तिम चरणको लागि आयो, जुन तपाईंलाई राम्रो सीवी सिर्जना गर्न तयार हुनेछ। यी चीजहरू सङ्कलन गर्नुहोस्, कम्प्यूटरमा बस्नुहोस् र तयार छ!
CV को लागि व्यावसायिक तस्बिर
राम्रो CV फोटोले काँधबाट उम्मेदवार देखाउँदछ, एक मिठो पृष्ठभूमि र एक कोमल मुस्कान संग। तपाइँले एक शर्ट वा एक राम्रो तस्वीर को लागी तटस्थ ब्लाउज लगाउनु पर्छ। उच्च-गुणवत्ताको फोटोहरू सम्झनुहोस्। यदि तपाईंसँग अझै तस्विर छैन भने चिन्ता नलिनुहोस् - तपाईं आफ्नो सीभी फोटो बिना नै पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको क्यारियरको सुरुमा, यस्तो फोटो लिन लायक छ - यो भविष्यको लागि उपयोगी हुनेछ। तपाईं फोटोग्राफरका सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा कुनै व्यवसाय सत्रमा नि: शुल्क भाग लिन सक्नुहुनेछ, जुन विद्यार्थी घटनाहरू वा रोजगार मेलाहरूको बारम्बार तत्त्व हो।
पूरा पाठ्यक्रमहरूको प्रमाणपत्रहरू सीभीमा प्रमाणपत्रहरू, पुरस्कारहरू र भेदहरू प्राप्त गर्थे
वास्तवमै विकसित भएको व्यक्तिहरूलाई स्कलन गर्नुहोस् तपाईं र नियोक्ताको लागि एक सम्पत्ति हुनेछ। यदि तपाइँ कोर्स र आयोजकको अन्त्य मिति याद गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले मूलहरू खोज्नु पर्दैन। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने, स the्कलित कागजातहरूमा जानुहोस्।
मिति र पाठ्यक्रमको विषयगत स्कोप, प्रशिक्षण लेख्नुहोस्। ती चीजहरूलाई हाइलाइट गर्नुहोस् जुन वास्तवमै छ तपाइँलाई विकास र तपाइँको प्राप्त सीपहरू देखाउनुहोस्।
CV को एक राम्रो उदाहरण समावेश प्रशिक्षण, आयोजक, मिति र विषयगत दायरामा तपाईंले दुबईको स्कूलमा राख्नु भएको छ।
पहिलो अनुभव कसरी प्राप्त गर्ने र तपाईंको CV लाई अझ बढावा गर्ने?
नि: शुल्क समयमा समर्पित एक शौक भनेको पहिलो नौकरी प्राप्त गर्न के गर्नु पर्छ? छुट्टै समयमा तपाईंको सपना कम्पनी र आकस्मिक गतिविधिहरूमा भर्तीको सम्बन्ध सम्बन्धी सम्बन्ध के हो ?.
एक चैरिटी कार्यक्रम, विद्यार्थी महोत्सव वा व्यवसायको लागि वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना को महत्त्व के हो? बाहिर जान्छ कि यो सबै ठूलो भूमिका खेल्छ! रोजगारदाताहरूले सक्रिय, प्रतिबद्ध र ऊर्जाले भरिएका उम्मेदवारहरूलाई महत्त्व दिन्छन्।
कुन तत्वहरूले दुबईमा तपाईंको CV स्पाइस गर्नेछ?
के तपाइँसँग असामान्य कौशल वा रुचि छ? वा हुनसक्छ तपाईंले जित्नुभयो उद्योग प्रतिस्पर्धा मा एक पुरस्कार? सीभी बनाउँदा, कृपया तपाईंको सम्भावित नियोक्तालाई सूचित गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको छवि भर्ती कागजात संग मिल्दो छ।
अधिक तपाईं जान्नुहुन्छ र जान्नुहुन्छ, तपाईंको सपनाको जागिर खोज्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंसँग भएका शक्तिहरू कसरी प्रस्तुत गर्ने। तपाइँको सीवी अधिक आकर्षक बनाउन को लागी, उदाहरण को लागी, युएई मा महत्वपूर्ण छ कि तत्व समावेश गर्नुहोस्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागिता, उद्योग पुरस्कार प्राप्त, रोचक परियोजनाहरूको कार्यान्वयन, सबै भन्दा राम्रो विशेषज्ञसँगसँगै काम गर्नुहोस् - त्यस्ता अनुभवहरू उल्लेख गर्दै, तपाईं एक व्यक्तिको रूपमा आफैलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ व्यावसायिक विकासमा संलग्न यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले प्रदान गर्नुभएको जानकारीले रोजगारदाताको आवश्यकतालाई जनाउँदछ।
जापानीज, चिनियाँ, कोरियाली, चेक, रूसी, डच - यी विदेशी भाषाहरूको उदाहरण हुन् जसको ज्ञान प्रयोग गर्ने क्षमता भन्दा धेरै कम सामान्य छ, उदाहरणका लागि, अंग्रेजी। कोनाईक भाषाको ज्ञान एक ठूलो सम्पत्ति हुन सक्छ र रोजगार बजारमा तपाईंको अवसरहरू बढाउनुहोस्।
स्वैच्छिक र अन्य गतिविधिहरू काम गर्ने घण्टा बाहिर प्रदर्शन गर्‍यो।
के तपाईं जगमा स्वयंसेवक हुनुहुन्छ? वा हुनसक्छ तपाईको खाली समयमा, तपाइँ बच्चाहरूको लागि खेल गतिविधिहरू व्यवस्थित गर्नुहुन्छ वा तपाइँ स्थानीय समुदायको फाइदाको लागि कार्य गर्नुहुन्छ? त्यस्ता गतिविधिहरू लिईएको प्रमाणित गर्दछ कि तपाईं संलग्न हुन सक्नुहुन्छ र समानुभूतिपूर्ण हुनुहुन्छ।
यो उल्लेख गर्न पनि राम्रो छ रुचिहरू जसले तपाईंलाई सीप विकास गर्न मद्दत गर्दछ। चेस तार्किक सोच सिकाउँछ। यात्रा विदेशी भाषाहरू सिक्न अनुकूल छ। मोडेल बनाउने धैर्य को गवाही, आदि।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईको जीवनमा हाजिर गर्ने फन्ट व्यावहारिक र कानूनी रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ। यसको लागि धन्यवाद, CV हुनेछ अधिक अभिव्यक्ति। कूरियर, कमेसी सेन्सर वा भिद्विल्ड जस्तै फन्टहरू छोड्न राम्रो। उदाहरणका लागि, क्यालिब्रिरी वा एरिडमा तपाइँले शर्त लिन सक्नुहुन्छ।
कागजातमा फोटो राख्नु भर्ती गर्नेको लागि विशेष व्यक्तिसँग उपलब्धिहरू सम्बद्ध गर्न सजिलो बनाउँदछ। व्यावसायिक फोटोग्राफीले कागजात पनि राम्रो देखाउन सक्छ। एउटा फोटोले तपाईंलाई सम्झिन पनि सक्दछ यदि उदाहरणको लागि तपाईलाई टिशर्टमा ह्यासट्याग सहित देखाईनेछ: # मलाई ट्याक गर्नुहोस्।
अतिरिक्त ग्राफिक तत्वहरू
सीभी, इन्फोग्राफिक्स, टाइमलाइनका लागि आईकनहरू - चित्र र योजनाहरूको रूपमा सामग्री प्रस्तुत गर्दा सान्दर्भिक जानकारी पाउन सजिलो हुन्छ, जस्तै सम्पर्क विवरण, योग्यता, आदि। रेखाचित्रले कागजातलाई अधिक आकर्षक देखाउन सक्छ। एकै साथ, यो सम्झन लायक छ कि यो सामग्री, एक बायोडाटा को रूप होईन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईंको CV मा रङहरू
तपाईंले कुन र choose्ग छनौट गर्नुहुन्न, तपाईंको CV स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं फेसन उद्योग मा एक रोजगार को लागी आवेदन गरीरहनु भएको छ भने, तपाईं प्यान्टोन रिपोर्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन दिइएको मौसममा तातो र colors्ग सूचीबद्ध हुन्छ।
तपाईंको सीभीमा प्रमाणपत्रहरू संलग्न गर्नुहोस् यो पुष्टि गर्नुहोस् कि तपाईंसँग उल्लेखित सीपहरू छन्। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा पोर्टफोलियो वा वेबसाइटको लिंक राख्नुहोस् तपाईंको कामको नमूनाहरूको साथ।
सबै भन्दा माथि पढ्न योग्यता
तपाईंको सीभीमा अतिरिक्त रचनात्मक तत्वहरू राख्दा, सावधान रहनुहोस्। जीवनी असाधारण हुन सक्छ र बाहिर खडा हुन सक्छ अन्य अनुप्रयोगहरूबाट। यद्यपि यो महत्त्वपूर्ण छ, यो सुवाच्य छ र स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ कि तपाईं खाली पदको लागि सही उम्मेद्वार हुनुहुन्छ।
अमीरातको प्रकारमा एक आधुनिक सीवी कसरी लेख्नुहुन्छ?
कर्तव्यों को बारे मा भेदभाव र विशिष्ट जानकारी संग सौंदर्य, वैध योग्य, विदेशी भाषा को कौशल र अन्य दक्षता को स्तर। त्यस्तो सीवी नयाँ वर्षमा तयार हुनुपर्छ।
कागजातसँग रचनात्मक हुनु हुँदैन ध्यान आकर्षित गर्न फारम। यो महत्त्वपूर्ण छ कि यसले मुख्य रूपमा रोजगार प्रस्तावमा सेट गरिएको आवश्यकताहरूमा प्रतिक्रिया गर्दछ।
CV धेरै लामो हुनु हुँदैन। म भर्ती बैठकमा अधिक विस्तृत जानकारीको लागि सोध्छु। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारीलाई पहिलो नजरमा हाइलाइट गर्दै - म निश्चित रूपमा लामो समय सम्म त्यस्तो कागजातको साथ रहनेछु। म CV हरू हुँदा म धेरै सराहना गर्छु मैले विज्ञापनमा राखेको जागिरको साथ मेल खाँए।
मलाई यकीन छ कि उम्मेदवार धेरै मेहनत गर्दैछ र ठूलो प्रस्तावमा कुनै प्रस्तावमा पुन: सुरुवात पठाउँदैन, तर सही नियोक्ताको लागि ध्यानपूर्वक हेर्दै छ।
के तपाई विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ? के तपाईं आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ? के तपाईं आफ्नो व्यावसायिक अनुभव विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईंलाई नयाँ सर्तहरू अनुकूल गर्नमा कुनै कठिनाई छैन? तपाईंको सीभीमा यसको बारेमा विशिष्ट शब्दहरू प्रयोग गरेर लेख्नुहोस्.
यसका लागि धन्यवाद, तपाई आफैलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र आफ्नो अवसर वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले के लेख्नुहुन्छ उदाहरणहरू द्वारा समर्थित छ, अर्थात यो व्यावसायिक अनुभवलाई बुझाउँछ र तपाईंलाई नियोक्ताहरूले मूल्यको योग्यता छ भनेर संकेत गर्दछ।
CV ले उम्मीदवारको बारेमा के भन्छ?
तपाइँको CV ले तपाइँलाई सूचित गर्न सक्दछ कि तपाइँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जो संलग्न हुन सक्नुहुन्छ, असामान्य विचारहरू छन् र तपाइँको व्यावसायिक योजनाहरूको अनुसरण गर्न प्रेरित हुनुहुन्छ। क्रममा तपाइँको CV को लागी एक राम्रो प्रमाणपत्र प्रदान गर्न को लागी, मुख्य पक्षहरू जस्तै:
तपाईंको जीवनीमा पोस्ट गरिएको जानकारी अपडेट गर्नाले कहिल्यै फेसनबाट बाहिरिदैन। जब नयाँ वर्ष सुरू हुन्छ, तपाइँको सीभीको ख्याल राख्नुहोस् र ताजा प्राप्त कौशल र योग्यताहरू थप्नुहोस्। यदि तपाईं निकट भविष्यमा आफ्नो रोजगार स्थान परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न भने पनि तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँको क्यारियर उपलब्धिहरु लाई बर्षमा वर्णन गर्न यो एक उत्तम तरिका हो।
यो राम्रो छ कि कम्पनीको नाम जब उम्मेदवारले काम गरेको वा काम गरेको छ, उद्योगको बारेमा संक्षिप्त जानकारीको टुक्रा लेख्नुहोस् जुन नियोक्ता विशेष हुन्छ, जस्तै एक इस्पात उत्पादक वा मोबाइल फोनको वितरक।
म एक सीभीमा पढ्न चाहान्छु कि उम्मेदवारले गर्ने कर्तव्यहरू वा को बारेमा अघिल्लो रोजगारदाताहरूसँग प्रदर्शन गरिएको र जुन मेरो रोजगार प्रस्तावको अनुरूप छ। त्यहाँ लेख्न आवश्यक छैन कि कोहीले 15 वर्ष पहिले वेटरको रूपमा काम गरिरहेको थियो यदि उहाँ अब सेवा प्राविधिकको लागि उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने।
छवि एकता र व्यावसायिकता। के तपाईं सम्भावित रोजगारदातामा सकारात्मक प्रभाव पार्न चाहानुहुन्छ? ध्यानपूर्वक एक व्यक्तिगत ब्रान्ड सिर्जना गर्नुहोस्। पेशेवर छनौटहरूमा एकरूप हुनुहोस् र एक विशिष्ट दिशामा विकास गर्नुहोस्। साथै, भर्ती कागजातहरू र तपाईंको बारेमा जानकारीको अन्य स्रोतहरूको समन्वय सुनिश्चित गर्नुहोस्। विचार यो हो कि तपाईंको सीभी, कभर पत्र, पोर्टफोलियो र तपाईंको दृष्टिकोण एक अर्काको पूरक हो।
"भोलिको प्रतिस्पर्धा" स indic्केत गर्ने सामग्री। के तपाइँ टोलीमा काम गर्न सक्नुहुनेछ, सक्रिय मनोवृत्ति प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ मिडिया प्रयोग गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ? CV मा उल्लेख गर्न नबिर्सनुहोस्, तपाईंको अघिल्लो व्यावसायिक अनुभव र कार्यहरू सम्पन्न वर्णन गर्दछ।
CV को Readability
सीभी ग्राफिक लेआउट सब भन्दा अभिव्यक्त तत्वहरु मध्ये एक हो। यदि यो तपाईंको छविसँग अनुरूप छ भने तपाईं कागजातमा ग्राफिक्स राख्न वा समयरेखा प्रयोग गरेर अनुभव वर्णन गर्न सक्नुहुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि यस्ता उपचारहरूले मात्र आकर्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ तर यो जीवन कहानी को पठन योग्यता मा। - सीभी पढ्दा, मेरोलागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि यसमा समावेश भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी बोल्ड र रेखांकन प्रयोग गर्न हाइलाइट हुनुपर्दछ।
युएईमा तपाईंको CV को प्रामाणिकता
वास्तविकतासँग सानो सम्बन्ध छ भन्ने छवि सिर्जना नगर्नुहोस्। आफैलाई विकास गर्नुहोस्, आफ्नो कौशल सुधार गर्नुहोस् र आफैं हुनुहोस्।
तपाइँको CV को अनुरूप छ? नियोक्ता को उम्मीदहरु?
उल्लेखनीय, धेरै रचनात्मक कागजात सिर्जना गर्नाले तपाईंलाई लाभहरू ल्याउन सक्छ, तर केवल केही सर्तहरूको अन्तर्गत। त्यो याद गर्नुहोस् सामग्री र सम्भावित रोजगारदाताको आवश्यकताहरूमा यसको प्रासंगिकता फारम भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छन्। यो पनि महत्वपूर्ण छ कि CV पेशाको लागि उपयुक्त छ। यदि तपाइँ लेखा विभागमा कुनै पोजिसनको लागि आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ भने, फ्ल्यास र colorsहरू र कलात्मक फोटोहरू त्याग्न उत्तम हुन्छ।
त्यस्ता तत्वहरू अप्राकृतिक देखिन्छन्। यो राम्रोसँग बाहिर खडा हो तर एक सकारात्मक तरिकामा। पेशाहरूको मामलामा सबै भन्दा बढि रचनात्मकता चाहिन्छ, एक बिस्तारै क्लासिकबाट विचलित हुन सक्छ र अभिव्यक्तिको बलियो माध्यममा राख्न सकिन्छ, र withहरूसँग खेल्दै वा सामग्रीको सजावट परिवर्तन गर्ने।
जब काम खोज्दै हुनुहुन्छ, यो आधुनिक उपकरणहरूको लागि खुला हुनु र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न लायक छ। उदाहरणको लागि, तपाइँ Pracuj.pl मोबाइल अनुप्रयोगको सम्भावितता पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई तुरून्त प्रस्तावको प्रतिक्रिया दिन र तपाइँको अनुप्रयोगको स्थिति अनुगमन गर्न अवसर प्रदान गर्दछ।